Waa sidee xaalada Guddoomiye Yariisow? (dhegayso) – Radio Daljir
Luulyo 28, 2019 9:45 b 0
Xaalada dadkii ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho ee loo qaaday dalka Qatar ayaa soo hagaagaysa sida uu warbaahinta u sheegay safiirka Soomaaliya ee dakaasi Qatar C/risaaq Faarax Cali Taano.
dadkii ku dhaawacmay qaraxii Muqdisho ee dalka Qatar loo qaaday waxaa ku jiray Guddoomiyaha Gobolka Baanadir ahna Duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow,Guddoomiyaha Degmada Warta-nabadda Seynab Xabsey iyo xubno kale oo ka tirsan Xafiiska Duqa Muqdisho.
Safiirka ayaa sheegay in xaalada Guddoomiye Yariisow ay soo hagaagtay ayna u yimaadeen eheladiisa si ay ula socdaan xaaladiisa caafimaad.
Barashada Farsamada Gacanta & Doorka Haweenka (dhegayso | daawo)